Ntụle ụgbọelu American ụgbọ elu Email - Atụmatụ nnweta | Martech Zone
American ụgbọ elu Email Revue - Usoro nnweta
Fraịde, Septemba 21, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enwetara m email site na American Airlines ebe ha ga-achọ ka m banye na nkwukọrịta ozi email ndị ọzọ. Na nloghachi, aga m abanye n'asọmpi ebe ha na-enye njem njem n'efu yana ị nweta ọtụtụ kilomita ma ọ bụ tiketi mbelata.
Ezigbo enyi m Chris Baggott ga-eme ihe atụ mgbe ụgbọ elu bịara mgbe ọ na-eweta ọdịnaya ndị ezubere iche maka ezubere iche. Airgbọ elu ahụ mara adreesị ụlọ anyị, ọdụ ụgbọ elu ụlọ anyị, usoro njem anyị… mana ha na-ezitere anyị ọpụrụiche maka njem na / site n'obodo ndị ọzọ na-abụghị usoro njem anyị, wdg. Ọ bụ ihe nzuzu… kama ịnye anyị ozi anyị na-achọ, ha na - ekewapụ anyị n’ezie ma anyị amachaghị agụ ozi ịntanetị ha zigara.
Taa m natara email site na America na ihe nkiri ahụ jidere anya m:
Mgbe ịpịrị, achọpụtara m na American mere nnukwu ọrụ na nke a. Njikọ ịpị nwere nwere 'igodo' nke gwara saịtị nnabata onye m bụ. N'aka nke m, mgbe m gbanwere mmasị m (otu-pịa, mfe, flash), nsonaazụ ya bụ ozugbo. Ekwesighi m itinye ozi ndị ọzọ ha nwere na ha anwaghị ịgbakwunye mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ maka ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ.
Nke a bụ ezigbo mkpọsa nnweta - Achọrọ m ịmata etu ọ ga-esi gaa nke ọma. O nwere ihe ịga nke ọma niile:
Ọ dọọrọ mmasị gị.
Ọ gbara ha ume.
O nwere oku ime ihe.
A na-ahụ ozi ahụ nke ọma.
The akakabarede usoro dị mfe.
Ezigbo! N'ezie, ezigbo ajụjụ bụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike idobe ozi ịntanetị ha dị m mkpa. Ọ bụrụ na ha enweghị ike, aga m wepu aha na nke a ga - efu.
Ekele diri Jim Cota na ndi otu na RareBird!
Nka na ụzụ na Oxymoron
Sep 21, 2007 na 9: 57 AM
Enwetara m ole na ole n'ime ha kam nweta nke ị kọwara. Ihe okike nke ReVue bu hokie na uche m, obu ezie na atumatu a di nma na…
Sep 21, 2007 na 12:45 PM
Ekwenyere m na Jonathan - mana ọ bụ site na agwa maka otu ozi ịntanetị ha na ọ dọọrọ uche m. Amaghị m na nke ahụ bụ ụma akụkụ nke atụmatụ - mana ọ rụpụtara!